“देश किन बनेन भनेर, अब एजेण्डा बनाएर,छलफल गर्नुपर्छ भनेको छु : माधव नेपाल” – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“देश किन बनेन भनेर, अब एजेण्डा बनाएर,छलफल गर्नुपर्छ भनेको छु : माधव नेपाल”
“काठमाडौं, १४ कार्तिक । सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देश किन बनेन ? भनेर अब एजेण्डा बनाएर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।”
“पार्टीनिकट नेपाल समाजवादी इन्जिनियरिङ एशोसिएसनको भेलामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भनेको छु, हाम्रो देश किन बनेन ? भनेर एजेण्डा बनाऔं । कहाँ रहेको छ समस्या ?’
“तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमै करोडौं खर्चिएर हेलिप्याड बनाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विमानस्थल बालुवाटारबाट दश मिनेटमा पुगिनेमा बालुवाटारभित्रै हेलिप्याड बनाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे ।”
“उनले आफूहरुसँग देश बनाउने चिन्ता र सोच रहेको सुनाए । उनले पार्टीले अब सामाजिक क्षेत्रमा महारुपान्तरण अभियान सुरु गर्ने पनि बताए । उनले निजगढमा छिटोभन्दा छिटो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने पनि बताए ।”
Previous “मेरै कार्यकालमा काठमाडौंवासी,लाई मेलम्चीको, पानी वितरण गर्छु : मन्त्री चौधरी”
Next “मुख्यमन्त्री, शाहीलाई, प्रचण्डको फोन : ढुक्क हुनुहोस, कर्णालीमा, सरकारको,नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन्”